Air bag and air bag - 英語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: air bag and air bag system (英語 - ビルマ語)
Exposures to polluted soil, water and air (both household and ambient) killed 8.4 million people in these countries in 2012.
ရေထုနှင့် လေထု (အိမ်တွင်း နှင့် ပြင်ပ ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်မျိုးလုံး) နှင့် ထိတွေ့ နေထိုင်ခြင်းတို့သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ယင်းနိုင်ငံများတွက် လူဦးရေ ၈.
လက်အိတ်များနှင့် အခြားသော တစ်ခါသုံး ပစ္စည်းများကို ဇီဝအန္တရာယ် ကာကွယ်မှု အိတ်များအတွင်း စွန့်ပစ်ပြီး ထိတွေ့ ပေကြံသော မျက်နှာပြင်များကို ယင်းနောက်တွင် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပြီး ပိုးသပ်ရမည်။ ဇိမ်ခံသင်္ဘောများ၊ နှင့် အခြား လူစီးသင်္ဘောများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းသုံး သင်္ဘောများ အတွက် နာမကျန်းသည့်အခါ ခရီးစဉ် ရွေ့ဆိုင်းခြင်း၊ နှင့် မိမိဘာသာ သီးခြားခွဲနေခြင်း နှင့် သင်္ဘောစီးနေစဉ်အတွင်း ကိုယ်ပူမြင့်ခြင်းနှင့် အခြားသော ရောဂါ လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာပါက ချက်ချင်း သင်္ဘောပေါ်ရှိ ကျန်းမာရေး စင်တာကို အကြောင်းကြားခြင်း အပါအဝင် ဘေးအန္တရာယ် ထိန်းချုပ်မှုများ လုပ်ဆောင်ရမည်။
ရွှေကို အိတ်ထဲက များစွာ ထုတ်လျက်၊ ငွေကို လည်း ချိန်ခွင်နှင့်ချိန်လျက်၊ ပန်းတိန်သမားကို ငှါး၍ ဘုရားကို လုပ်စေပြီးမှ၊ ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ကြသည်တကား။
ငွေများသည်ကိုသိမြင်လျှင်၊ ရှင်ဘုရင်၏ စာရေး တော်ကြီးနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် လာ၍ဗိမာန် တော်၌စုသောငွေကို ထုတ်ထားလျက် စာရင်းယူ၏။
လွယ်အိတ်ထဲက ကျောက်တလုံးကို နှိုက်ယူ၍ လွှဲပစ်၏။ ဖိလိတ္တိလူ၏ နဖူးကို မှန်၍ နဖူးပေါက် သဖြင့် သူသည် မြေပေါ်မှာ ငိုက်စိုက်လဲလေ၏။
ok lang sila lahat (タガログ語>英語)kehittämistoimintaan (フィンランド語>チェコ語)i don't deserve from you (英語>タガログ語)cutting hall (英語>オランダ語)ျမန္မာေအာကား 1 (カタロニア語>英語)lenght (英語>イタリア語)تریوایلر (ペルシャ語>ポルトガル語)atapoint of change (英語>ペルシャ語)svartrot (スウェーデン語>デンマーク語)meddwl am eich (ウェールズ語>英語)kamusta na kayo ng boyfriend mo (英語>タガログ語)work speed (英語>タガログ語)spiritalia (ラテン語>韓国語)2) 構成部品の供給 (日本語>英語)私は正義 (日本語>英語)mahal palitonon (タガログ語>英語)epulentur (ラテン語>タイ語)my of my favorite line (英語>ヒンズー語)meri pari (ヒンズー語>英語)معدني (アラビア語>エスペラント語)pejabat (マレー語>アラビア語)zavádějících (チェコ語>英語)i can't do anything (英語>ヒンズー語)station de t�te (フランス語>英語)duling dulingan (タガログ語>英語)